မကြေးမုံ - တရေချိုးခန်း၏အရေးအပါဆုံး Attribute တွေတဦး။ သို့သော်အမျိုးသမီးအများစုမှန်မပါဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့တစ်ဦးရေချိုးခန်း၏မစဉ်းစားကြဘူး။ အားလုံးနီးပါးအလှကုန်ရေချိုးခန်းအတွက်တရားမျှတလိင်ထဲကနေသယ်ဆောင်လုပျထုံးလုပျနညျး, ဒါကြောင့်ရေချိုးခန်းထဲအတွက်ကြေးမုံ၏ရွေးချယ်မှုအရေးပါသောနှင့်တာဝန်ရှိအရေးယူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာသင်ရေချိုးခန်းမှန်, သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးနဲ့တပ်ဆင်ခ၏မျိုးကိုအကြောင်းသင်ယူရပါလိမ့်မယ်။ ရေချိုးခန်းမှန်မှာ အမျိုးအစားများ ရေချိုးခန်းထဲမှာ အမှတ်တရကြေးမုံ။ ကြေးမုံ၏ဤအမျိုးအစားအသုံးအများဆုံးနှင့်အဆင်ပြေသည်။ ကြေးမုံ, များသောအားဖြင့်နစ်အထက်တပ်ဆင်ထားသည်။ ခေတ်မီသောထုတ်လုပ်သူရှိသမျှအရသာများအတွက်နံရံတစ်ခုကြေးမုံသူတို့ဖောက်သည်ကိုဆက်ကပ်။ ထိုအခန်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး preference ကိုပေါ် မူတည်.
ဆံပင်ကြာပွတ်သောအခါ သူတို့ကအရမ်းဆွဲဆောင်မှုမရှိကြည့်ရှုပါ။ သငျသညျစိုစွတ်သောဆံပင်ဖြီးဘယ်တော့မှလျှင်, ချမ်းအေးသောလေထုမှသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နှင့်ဆံပင်လေမှုတ်စက်ခန်းခြောက်, ဒါပေမယ့်သူတို့နေဆဲရုပ်ဆိုးကြည့်ရှုရမှစတင်ကြပါဘူး, သင်သာတလမ်းတည်းကိုကူညီ - အုပ်စုခွဲကြီးစွန်းတစ်မျက်နှာဖုံး ။ မျက်နှာဖုံးများများအသုံးပြုမှုကြီးစွန်း ခွဲထွက် မအုပ်စုခွဲဆန့်ကျင်မဆိုမျက်နှာဖုံးဆံပင်တစ်ခုလုံးကိုအရှည်ကျော်တာအကောင်းဆုံးအသုံးချဖြစ်ပါတယ်ပြီး၏။ ဤသည်မှာတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းအာဟာရဓာတ်နှင့်အတူဆံပင်ဖြည့်စွက်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့ကိုညှပ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်ဒါကြောင့်အပြည့်အဝဆိုးရွားစွာထိခိုက်ပျက်စီးအကြံပေးချက်များအောင်မြင်ဖို့နည်းပါးတယ် restore ဖို့မေ့မနေပါနဲ့။ မအုပ်စုခွဲများအတွက်မျက်နှာဖုံးသင် 45 ရက်တစ်သင်တန်းကိုလိုအပ်ပါတယ်နှင့်အနည်းဆုံး2ကြိမ်တစ်ပတ်လျှင်ပြုပါကသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့အမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေထိတွေ့ခြင်းမှသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဆံပင်၏အဆုံးသတ်ပေမယ်။ ထိုကဲ့သို့သော tool များ၏ပလီကေးရှင်းပြီးနောက်မှသာပူနွေးသောရေနှင့်အတူဆံပင်သုတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ထိုသို့ရေကိုပစ္စုပ္ပန် chloro ခဲ့ကြောင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ပဲနာရီအနည်းငယ်သောရေကိုရပ်တည်ချက်စေလိုပါတယ်။ အုပ်စုခွဲစွန်း မလျော်အသုံးပြုမှုအိမ်ပြန်မျက်နှာဖုံးကူညီပေးသည်: ခြောက်သွေ့တဲ့ဆံပင် moisturize နှင့်အားနည်း;
"ကြောင်ဖြူဆင်းခြင်း" alt + = အချိန် မှစ.
မီးဖိုချောင်နာရီကိုခုနှစ်တွင်တစ်ပြေးညီနှင့်ရေတစ်ရေပိုက်ခေါင်း, ပြင်ပအသံတွေကိုနှင့်ကားဆူညံသံအနေဖြင့်ရွှဲနှင့်တစ်ခုတည်းသောလူ့အသံသာတီဗီကနေကြားရကြ၏။ ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုတစ်အထီးကျန်လူသား၏ပြင်ပကမ္ဘာဆွဲနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျပြဿနာတွေမျှဝေနိုင်ပါသည်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူတယောက်မျှမရှိအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရေးရာနှင့်အတူအလုပ်ရှုပ်နှင့်ကမ္ဘာတစ်လျှောက်လုံးသင့်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဂြိုလ်သားပတ်ပတ်လည်အရာအားလုံးကို, ဖြစ်ကောင်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ကသူတို့အသက်တာ၌အသီးအသီးတွေ့ကြုံခံစားသောခံစားချက်။ ဒါပေမဲ့တချို့, ဒီပြည်နယ်ကြွလာနှင့်ချက်ချင်းနီးပါးပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာသို့မဟုတ်တည်းဟူသောအသက်မှတဆင့်သယ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်လူတွေအထီးကျန်ခံစားရတယောက်တည်းဖြစ်ခြင်းဖို့အသုံးပြုရရန်မည်သို့?
အိမ်မှာ Date ကိုစွန်ပလွံ
ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောအပင်ပေါက်ရန်အတွက်, finikovoy palmy တူ, အဘယ်သူမျှမကအခြားတော်ပါတယ်ဖြစ်ကောင်းလည်းရှိ၏။ အရိုးအနီးတစ်အထူးပြု store မှာဝယ်ယူနီးပါးအစဉ်အမြဲစိမ်းလန်းအပင်အတွက်အချိန်ကျော်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ, အညှောက်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤမျှလောက်များစွာသောစွန်ပလွံပင်အိမ်တွင်ပင်အရင်ကဆိုရင်စိုက်ပျိုးဒါကြောင့်ပါပဲ။ ထိုစွန်ပလွံပင်၏ မင့်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုက 17 ဦးမျိုးစိတ်များကိုရှိပါတယ်။ သို့သော်သုံးဦးသာထိုသူတို့ကို၏ - အိမ်နှင့်တိုက်ခန်းများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်သောဤအခန်းတစ်ခန်းနေ့စွဲလက်ဝါး: မန်ကျည်း Robel, Kanapsky နှင့် Palchaty နေ့စွဲ။ သငျသညျအမြင့် 10-15 မီတာအထိရောက်ရှိတဲ့အခါမှသာထို Ovary ကဖွဲ့စည်းနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့, ဗိမာန်စက်ရုံများထူးခြားဆန်းပြားအသီးအပွမပေးပါဘူးသတိပြုရကျိုးနပ်သည်။ မကြာခဏစိုက်ပျိုးသူများကယျြဝနျးအခန်း၏ဒီဇိုင်း element ကအဖြစ်စွန်ပလွံပင်ကြီးထွားဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ပါပြီ။ ကိစ္စအများစုအတွက်, ရွေးချယ်မှုသုံးခုအမြင့်မီတာသို့မဟုတ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအတွက်လုံးဝ undemanding ဖြစ်သည့်ဘက်ပေါင်းစုံမန်ကျည်း Robel, ချီ, အမွန်မြတ် palmatum ရက်စွဲများ၏မျက်နှာသာအတွက်ဖန်ဆင်းထားသည်။ စိုက်ပျိုးစွန်ပလွံပင် စွန်ပလွံပင်ကိုစိုက်ရန် - ဒါဟာရိုးရှင်းလွယ်ကူကြောင်းနှင့်ထိုသို့အရိုး၏လွတ်လပ်စွာကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။ ရက်စွဲများအစာစားခြင်း, ရောင်ရမ်းခက်တဲ့ shell ကိုမှရေထဲမှာသုံးယောက်လက်ထက်ကာလ၌သူတို့ကိုအားမရနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုကျောက်ခဲတို့ကိုထားခဲ့။ သငျသညျအရိုးရေနွေး showering, ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်အရှိန်မြှင့်နိုင်ပါ။ စွန်ပလွံပင်မြေဆီလွှာသည်သစ်ဆွေးသဲဖုန်မှုန့်နှင့်အတူရောထွေးကိုယူသင့်ပါတယ်။ အလွှာအိုးတလုံးကိုဖြည့်ဆည်း, အရိုးတို့ကိုနေရာချဖြောင့်မတ်အနေအထားနှင့်ရေညှိဒါမှမဟုတ်ဖန်ခွက်ကိုအဖုံးနှင့်အတူထိပ်တန်းအဖုံးအတွက်မြေ၌ယောင်ပြီး။ စွန်ပလွံပင်၏ဝါဒဖြန့်ဘို့အဆုံးအပူချိန်မှာ - 25-30 ဒီဂရီ။ 5-6 ပါတ်အတွင်းသင်ပင်ပေါက်မြင်ကြလိမ့်မည်။ ဇွန်လအတွက်တရားရုံးကလျှင်, အပင်ပေါက်ရန်အတွက်လွင်ပြင်ထဲကသယ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ 10 စင်တီမီတာမှစိုက်ပျိုးအရပ်ရှည်ရှည်စွန်ပလွံပင် ("ဇာတိ" မြေကွက်တစ်စိမ်းနှင့်အတူပုံမှန်အတိုင်းကဲ့သို့) အိုးတလုံးသို့အစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။ သာငါးနှစ်ကြာအကြာတွင်အိမ်တွင်စိုက်ပျိုးစက်ရုံတစ်ရုံ, သင်ပထမဦးဆုံးစာရွက်အားငါပေးမည်။ စွန်ပလွံပင် များအတွက် Caring အခုတော့ဘယ်လိုအိမ်တော်အစွန်ပလွံပင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်။ ဤသည်စက်ရုံအလင်းနှင့်အစိုဓာတ်ကိုချစ်တော်မူ၏။ သင်မှန်မှန်နေစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအိုး rotate လျှင်အလှတရားပြန့်ပွားမှသာအမှုဖွစျနိုငျမပေါက်ပါဘူး။ စွန်ပလွံပင်ကြီးထွားလာကြောင်း, ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်မြှားစာရွက်များ၏လမ်းညွှန်အခန်းထဲသို့တဟုန်တည်းပြေးကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်ပူသောရာသီဥတု, စွန်ပလွံမလိုလားအပ်သောတိုက်ရိုက်နေရောင်ထဲမှာ။ စွန်ပလွံပင်အဝါရောင်အရွက်ပါက, သိပ်သူမ၏ဖို့ကမ္ဘာကြီးကိုကိုဆိုလိုသည်။ နွေရာသီအတွက်ကြောင့်ဥယျာဉ်တော်၌သို့မဟုတ်လုံးဝမမူကြမ်းရှိပါတယ်ရှိရာဆောင်ပေါ်မှာစက်ရုံလုပ်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ နွေရာသီ၌ရှိသကဲ့သို့, ဆောင်းရာသီရေလောင်းမှန်မှန်သည်စွန်ပလွံရက်စွဲရန်လိုအပ်ပေသည်။ သာနွေရာသီရေလောင်းအတွက်ဆောင်းရာသီတွင်အပေါများဖြစ်သင့်ပါ - အလယ်အလတ်။ အစိုဓာတ်မရှိခြင်း - ။ ပွနျလညျထူထောငျကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအရွက် wilting အကြောင်းရင်းတွေထဲက နွေဦးပေါက်နဲ့နွေရာသီမှာတော့ကြောင့် (တစ်ပါတ်လုံလောက်တစ်ချိန်က) စက်ရုံတွင်းထွက်နှင့်အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာကျွေးဖို့အကြံပြုသည်။ ပိုးမွှားများနှင့်ရောဂါများ ဒီတော့လျှင်, အရာအားလုံးကိုချက်ချင်းလက်ငင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမလိုအပ်, ရောဂါနှောင့်အယှက်စက်ရုံရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘယ်လောက်နေ့စွဲစွန်ပလွံပင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ခဲယဉ်းသောရေ - ထိုတိုးတက်မှုနှုန်းသည်ဉာဏ်ရည်မမီအတွက်ရရှိလာတဲ့ chlorosis ၏အကြောင်းရင်း, အရွက်ပေါ်အစက်အပြောက်အညိုရောင်, သူတို့ရဲ့အဝါရောင်။ အပူချိန်ကထိန်းချုပ်မှု, အချိန်မီနှင့်ပုံမှန်ရေလောင်း - ။ စက်ရုံကျန်းမာရေးကိုအဓိကသော့ချက် မရံဖန်ရံခါသည်စွန်ပလွံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် mealybug, ပင့်ကူသွင်းနှင့်ဟိုဆေးစကေးရက်စွဲ။ မြင်နိုင်သောပိုးမွှားကို manually နှင့်အရာကြွင်းလေဖယ်ရှားပစ်ရမည် - အထူးကိရိယာတွေနဲ့ပက်ဖြန်းသည်။ အရွက်ကိုပျက်စီးစေခြင်းနှင့်ဆပ်ပြာရေနှင့်အရင်ဆေးမနေပါနဲ့။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, အုန်းလျော့နည်းအာရုံစူးစိုက်မှုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကြည့်ရှုမည်
အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့ပျားရည်ဆမ်းခရီးခရီးစဉ် မမှတ်ပုံတင်ခြင်း - သင်အစားထိုးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မဟုတ်လျှင်အမည်များပြောင်းလဲနေတဲ့သည့်အခါဤနှစ်မျိုးအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်များမရရှိသေးနိုင်ပါသည် မ။ အဟောင်းကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်?
နိစ်အပေါ် Cookies တွေကို
နိစ်အတွက် Cookies တွေကိုအစားအစာအချိုပွဲသည်မဟုတ်, ဇာတ်လမ်းနှင့်ဤအချိန်ကျွန်တော်အစာအာဟာရကိုမရည်စူးပါသည်။ ဒီအချိန်ကျနော်တို့ကနိစ်အပေါ်လုပ် cookies တွေကိုချက်ပြုတ်ဖို့သင်ယူပါလိမ့်မယ်။ နာမည်ကြီးအဖြူငံပြာရည်တူဒီဖြည့်စွက်, တစ်ဦး cookie ကို့သည်ကြီးမြတ်တော်မူသော, pastries ပိုအဆီပြန်ပျော့ပျောင်းနှင့်သိပ်သည်းစေခဲ့သည်။ mayonnaise အတူ crumbly cookie ကိုစာရွက် လက်ဖက်ရည်အဘို့, ပျော့ပျောင်းမွှေးနှင့် crumbly ဘီစကွတ်အဘို့ မြန်ဆန်အရသာရှိတဲ့စာရွက်ချက်ပြုတ်ဘို့အချိန်လုံလောက်စွာမပါသောအခါ, အစဉ်မပြတ်သူများအတွက်အချိန်လေးအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးမှလာကြလိမ့်မည်။ ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများ: နိစ် - 100g;